China Super C1S Folding Box Board/ GC1 osisi ọdụm/ Nnukwu dị na mpịakọta na mpempe akwụkwọ na ndị na -eweta ya | Akwụkwọ doro anya
Super C1S Folding Box Board/ GC1 osisi ọdụm/ Nnukwu dị na mpịakọta na mpempe akwụkwọ
Ngwongwo dị elu dị mma, 100% Pulp Pure Pure, Ezi nkwụsi ike.
1: Nyefee mbukota
Ọbọp na 3 n'ígwé siri ike PE ntekwasa kraft liner akwụkwọ.
2: Nnukwu akwa mbadamba
Ejiri ihe nkiri OPP kpuchie, kpuchie ya na pallet osisi siri ike, a ga -echebe nkuku 4 site na bọọdụ katọn.
3: Ream mbukota
Mpempe akwụkwọ 100 ejiri akwụkwọ kraft PE siri ike kpuchie, kpuchie ya na pallets osisi nwere ndị na -echebe akụkụ anọ.
4: ụzọ nkwakọ ngwaahịa ahaziri iche
Ọmarịcha teknụzụ na -emepụta ihe, iji akụrụngwa dị elu, ike siri ike na nkwụsi ike, ike siri ike na nnukwu, arụmọrụ igbe ọnwụ dị mma;
Ọcha dị ọcha, hue kwụsiri ike, mkpuchi dị mma, mbelata nke ọma na ntụpọ mbipụta;
Inking siri ike na Mmetụta obibi akwụkwọ dị mma.
Anụ glossiness, Ezigbo na siri elu, ike na agba.
Ime ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ achọrọ maka ihe tabacco
Ejiri ihe mkpuchi kpuchie, dị mma maka ibipụta ụdị akwa sịga niile dị elu
Mbelata akara ntụpọ dị mma, ike elu ya na ịkpụzi igbe, na-etinye ya na igwe ịkwa akwa sịga dị elu
Mpempe akwụkwọ dị larịị ma dịkwa mma, ntachi obi dị elu, na -akwado ịchebe oke na -enweghị mmebi;
Oké ma dị nro, siri ike zuru oke zuru oke, arụmọrụ na -enweghị atụ na ịkpụzi ya
Ọdịdị siri ike, akwụkwọ kwụ ọtọ, ngwa sara mbara.
Akwụkwọ osisi mpịachi igbe bọọlụ Ivory
Ịkpakọba ntachi obi
Oge okpomọkụ 8.0-8.6
Oge oyi 8.3-8.9
Oge ọkọchị 8.3-8.9
Oge oyi 8.6-9.2
Ihu 91 ± 1.5 Azu 91 ± 1.5
Mbipụta elu siri
Ọnụ nke Ngwa:
170/190 gsm ---- akpa akwụkwọ, igbe onyinye dị elu, kaadị ịkpọ oku, akwụkwọ nta mgbasa ozi na akwụkwọ ozi, mkpado, akpa akpa
210/230 gsm ---- ebipụta ụcha nke imepụpụta ụra: ngwugwu sịga nke ọkara na nke dị elu, ọgwụ, kaadị azụmaahịa, nri, akwụkwọ ozi, origami, ngwugwu mmiri ara ehi, ngwugwu ihe onunu, iko akwụkwọ mkpofu, iko tii mmiri ara ehi, ụta akwụkwọ
250 gsm ------------ igbe onyinye dị elu, igbe ịchọ mma, ọba mgbasa ozi, kalenda
300 gsm ------------ igbe akwa akwa, igbe ihe ụmụaka ji egwuri egwu, igbe ngwaahịa nlekọta ahụike, igbe ngwaahịa elektrọnik, igbe ọgwụ
Aro ndị a dị n'elu bụ maka ntụnye aka naanị, dabere n'ọnọdụ gị n'ezie.
Nke gara aga: OEM nri kacha mma ọkwa ọkwa ọdụ ụgbọ/FBB/SBS Board akwụkwọ
Osote: Ọrịre na -ere ọkụ ahaziri sze nwere ezigbo ọnụ ahịa igbe mpịakọta igbe
C1s Ogwe osisi Ivory
Ndị China Fbb
Ịkpakọ Igbe Igbe
akwa nnukwu mpịachi akwụkwọ
Akwa nnukwu osisi bọọdụ
Akwụkwọ osisi Ivory
Akwụkwọ osisi Ivory na -acha ọcha
Ogige Akụkụ Ivory
Hot -ere ahaziri sze na ezi price Fol ...
OEM kacha mma nri ọkwa ọdụ ọdụ/FBB/SBS ...